व्यवसायीले बजार अनुगमन नपर्ख | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / व्यवसायीले बजार अनुगमन नपर्ख
व्यवसायीले बजार अनुगमन नपर्ख
Posted by: युगबोध in विचार October 9, 2018	0 105 Views
धो रो रो रो आवाज निकाल्दै रक्सी नालामा घो प्ट्याउदा भरतपुर क्षे त्रमा धे रै का कान ठाडा भएका थिए । आफ्नो पनि फालिदिन्छन् भन्ने त्रास धे रै मा थियो  । अलि परसम्मका पनि व्यवस् थापनमा लागे का दे खिन्थे  ।
अनुगमनमा जो आए पनि फरक पदैर् न भन्ने गरी ढुक्क रहे का व्यवसायी खासमा भे टिएनन् । आफूलाई प्रतिष्ठित व्यवसायी भन्ने ले पनि गल्ती गरे को भे टिएको छ । धेरै व्यवसायीले मात्र कानूनसम्मत व्यवसाय गरे का छन् । यसको मतलव तस् कर र भ्रष्टको दे श बन्न सजिलो छ ।
अनुगमन टो लीले सानातिना खुद्रा पसल गनेर् हरुले पनि आफ्ना सामानमा उपभो ग्य मिति ख्याल नगरे को भे टायो  । उपभो ग्य मिति नभएकै कारण कतिपय पसलको सबै विस् कुट उठाएको थियो े  । लाइसे न्स नभएकै कारण पसलको सबै महंगो रक्सी अनुगमन टो लीले उठाएको थियो  । पसलै रित्तिने गरी अनुगमन टो लीले लै जाने व्यवसाय किन गरिन्छ ? कमजो री कसको हो ?
उपरखुट्टी लगाएर ठालु बनी से खी झानेर् हाम्रो शान मानिन्छ । घुम्रिएर काम गर्न लागे को लाई अपमान गरिन्छ । आरनमा काम गरिरहे को अनौ ठो पे शा ठानिन्छ । बगरका गिट्टी कुटे को लाई व्यापक प्रचारप्रसार गरिन्छ । उनीहरुको संघर्षमय जीवनको सम्मान हो इन दया दे खाएर हे ला गनेर् चलन छ । श्रमको सम्मान गर्न हो इन कि काम गरिरहे का नागरिकलाई भड्काउने पे सै छुट्याउने संस् कार छ ।
पसल अगाडि घाममा पिठ्यू“ से काएर दिन धके लिरहे का धे रै छन् । उनीहरु आफ्नो पसल अगाडिको प्लाष्टिक टिप्दै नन् । नाला दुर्गन्धित भएको दे ख्दै नन् । पसल व्यवसायमा बसे र मो बाइल खे लाएर बिताएका हुन्छन् । छिटुवामा तरकारी बे च्दै हि“ड्ने लाई निम्छरो व्यवहार दे खाउ“छन् । को ही ग्राहक आएपछि बे च्ने हो  । नत्र कुरे र बिताउने हो  । त्यो सुहाएको हु“दै न । कम्तिमा सामानको धुलो झानेर् , त्यसमा रहे को उपभो ग्य मिति जा“च गनेर् , खराब भएको अलग गर्न त सकिन्छ नि ?
पसलमा रहे का सामानको अवस् था हे र्न नभ्याउने व्यस् तता थो रै को छ । कुन सामान छ, त्यसको उपभो ग्य म्याद कति हो ? भने र खो जतलास गर्न सक्छन् । ठूला पसलहरुले पनि कर्मचारी परिचालन गर्न सक्छन् । उनीहरुले पसल तथा गो दामको सामान जा“च गरे र अलग्याउ“न सक्छन् । म्याद गएका सामान फिर्ता गर्ने र नमिल्ने लाई नष्ट गनेर् मनसाय मात्रै हुनुपर्छ ।
अधिकांश उपभो क्ताले उपभो ग्य मिति हे दैर् नन् । बिग्रे का खाने कुरा पनि किने र लै जान्छन् । त्यही स् तरका कतिपय पसले हरु पनि छन् । कतिपय उद्यो ग नै खराब छन् । तिनले उपभो ग्य मिति हाले को पत्ता लगाउनै सकिन्न । कति धे रै निज्याउ“दा पनि उत्पादन र उपभो क्ता मिति भे टिन्न । तिनलाई सरकारले तह लगाउनुपनेर् हो  । यहींको उत्पादन पाउरो टी वे करीको समे त म्याद थिएन । सबै ले हाले पछि म पनि हाल्छु भन्ने व्यवसायीको भनाइ थियो  । पाउरो टी तथा बे करी समिति नै गठन गरे र अशो क श्रे ष्ठ, शरद थापा, नरे श श्रे ष्ठलगायतको सक्रियतामा सम्भव भयो  । दाङ जिल्ला उद्यो ग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुसालको चल्तापुर्जा ने तृत्वले कार्यान्वयनमा ल्यायो  । यही विषय जिल्लाका अरु बजारमा कार्यान्वयन भएको दे खिन्न ।
अनुगमनको क्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणे शप्रसाद आचार्यले ठूलै पसलबाट म्याद गएको सामान निकाल्नुभयो  । ती व्यवसायीले हो इन हजुर यो फिर्ता गनेर् हो भने र हात जो ड्नुभयो  । आचार्यले अब फिर्ता हामीले गछौर् ं तपाइ“ले पदैर् न भन्दिनुभयो  । आचार्यको भनाइ थियो – म्याद गएको सामान अलग गरे र राख्नुपर्दथ्यो  । भित्र गो दाममा स“गै राख्नुभएको छ । सबै भन्दा पुरानो दे खिने सामान ताने र म्याद हे नेर् आचार्यको बानी थियो  । ती व्यवसायीले ‘मै ले टाडीमा राखे को छै न । भित्र–भित्र गो दाममा त जे पनि राख्न पाइन्छ ।’ यसमा अनुगमनमा सहभागी उपमे यर सीता न्यौ पाने , दाङ जिल्ला उद्यो ग वाणिज्य संघका उद्यो ग उपाध्यक्ष वसन्त जो शी लगानी गरे को पै सा फिर्ता आउ“छ, कम्पनीले दिन्छ भने त के भो त, घाटा नहुने काम गरौ ं भन्ने मा सहमत हुनुहुन्थ्यो  । यसमा मे रो असमति छ भने र आचार्यले असन्तुष्टि जनाउनुभयो  । साना पसलमा फाल्ने ठूलामा फिर्ता हुन्छ भने र छो ड्न सकिन्न भन्दै उठाउन आदे श दिनुभयो । प्रहरीले लगिछो डे  । अन्तबाट पनि यस्तै समान जफत गरे को हुनाले यसरी लै जानु न्यायिक थियो  ।
धे रै पसल व्यवसायमा दर्ता प्रमाणपत्र नभे टिदा नया“ समस् या खडा भएको छ । पसलमा बस् ने ले नभे टाउने , राख्ने वाला सम्पर्कमा नहुने दे खियो  । उनीहरुले टंगाएर छो डे को भए सजिलो हुने थियो  । दर्ता भए पनि प्रमाण नभे टिदा के हीको मदिराजन्य पदार्थ जफत भएको छ । प्रमाणपत्र ताल्चा लगाएर आफू काममा हि“ड्ने गरे को भे टियो  । नवीकरण नगरिएका व्यवसाय पनि भे टिएका छन् । उनीहरुले पनि आफ्नो कमजो री हो भन्दै सुधार्नुपर्छ । तर स् थायी भए गनेर् चले न भने किन दर्ता गनेर् ? भर्खर दुईचार महिना भयो  । त्यसै ले दर्ता गरे का छै नम् भन्थे  ।
के हीले फुर्सद नपाएर पनि नवीकरण नगरे को जानकारी दिए । उनीहरुले एउटा सरकारको तीन ठाउ“मा कर तिर्नुपनेर् नियममा आपत्ति जनाएका छन् । स् थानीय सरकार बनिसके पछि सबै ले त्यहीं दर्ता गनेर् र नवीकरण गनेर् व्यवस् था मिलाउनुपर्छ भन्ने माग छ । स् मार्ट सिटीको अवधारणा छ । बत्तीको बिल इ से वावाट तिर्न मिल्ने भएको छ । व्यवसायी भने कर तिर्न घुस बो के र कार्यालयमा पुग्नुपर्छ । समयमा काम हु“दै न । सबै ठाउ“मा तिनेर् रकम एकमुष्ट दिने गरी व्यवस् था मिलाउन माग छ । यो जायज मागप्रति उद्यो ग वाणिज्य संघले पहल गर्न जरुरी छ ।
पसलभित्र पस् यो नै फो हो रको रास थियो  । खुसुक्क प्रहरीहरु ग्राहक सुत्ने को ठामा पुगे छन् । उनीहरु जंगिदै आए । ए साहुजी त्यहा“ को बस् छ ? जवाफ आयो ग्राहक, अनि चुरो टका ठुटा मात्रै छन् । बढारे को पनि छै न । सबै तिर धुलै धुलो छ । गन्ध आउ“छ । है ट यस् तो मा को मान्छे बस् छ ? हो टलवालाको जवाफ थियो । रात विरात आएकालाई सुताउने हो  । यस् ता कमजो री अनुगमनले भे टायो  ।
यतिबे ला अनुगमन अलि सक्रिय भएको छ । कहिले औ षधि, कहिले चाउमिन, फलफूल, खाद्य, हो टल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय हरे कको पालो पालो अनुगमन गरिएको छ । दिनदिनै अनुगमन चाडपर्वको बे लामा दे खिएको छ । अरु बे लामा छड्के अनुगमन हुने गरे को छ । यसको अर्थ अनुगमनलाई सघन बनाइ“दै छ । सरकारको नीति नियम बाहिर रहे र कसै ले पनि व्यवसाय चलाउन सक्दै न । खरीद बिल र बिक्री बिल मिलाउन नसक्ने , कारो वार नदे खाउने र करछलिका, अण्डरविलिङका समस् या के ही लामो समय रहलान् । दर्ता नगरे रै व्यवसाय गर्न भने अब सकिन्न ।
चाडपर्वको मौ समी अनुगमन भने र सदाबहार टिप्पणी चलिरहे को सुनिन्छ । यहा“ अनुगमन गरी हुन्छ र ? फलानो ठाउ“को हे र्नुछै न भन्ने फटाहाहरु पनि छन् । एउटाका मात्रै फाले र हुन्छ । यस् ता त कति छन् कति । सबै फाल्नुप¥यो नि ? उपमे यर हि“डे र हुन्छ कर्मचारी खटाउनुप¥यो  । यस् ता कुरा सुनिन्छन् । एकै चो टि सबै समाधान हु“दै न । कम्तिमा दर्ता नभएको पसल उद्घाटन गर्न संघका मान्छे हरु जान छो ड्नुपर्छ । कर नतिनेर् पसल व्यवसायीको उपमहानगरपालिकाले फो हो र उठाउनु हुन्न । वडा कार्यालयदे खि सरकारका कुनै पनि काममा दर्ता नभएका पसल व्यवसायबाट कारो वार गरिनु हुन्न । अनुगमन नगरले गरे पनि प्रक्रियामा ल्याउने दायित्व वडा कार्यालयले सम्झिनुपर्छ । टो ल विकास संस् थाहरुले जिम्मे वारी लिनुपर्छ ।
पूर्णरुपमा नियमसम्मत चले को को ही छै नन् । सरकारका उच्च पदस् थ अधिकारीहरु सबै भन्दा बढी उल्लंघन गर्छन् । से तो प्ले टवाला गाडी चलाउने हरुले लाइसे न्स व्लुवुकको वास् ता गदैर् नन् । अहिले बल्लतल्ल ठूला ठे के दारलाई मुद्दा लगाउने कदम शुरु भएको छ । सांसद पद निलम्बन गरे र पप्पु ठे के दारलाई कारवाही गरियो  । क्रमशः सुधार ह“ुदै छ । सिष्टममा ल्याउने प्रयत्न गरिदै छ । हामीले आफ्नो स् थानीय सरकारमा कर तिरिरहे का छौ ं । हाम्रा मे यर, उपमे यर र वडाध्यक्षहरु त्यही रकम दुरुपयो ग गरे का छन् भने खो जौ ं । वडा सदस् यले पनि तलव खाएका छन् ।
तिनले काम गरे का छै नन् भने लतारे र काममा लगाउ । सबै जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्छ । त्यसवापत हामीले तिरे को करबाट तलव खान्छन् । उनीहरुलाई घिसारे र काममा लगाउने है सियत बनाउन आफू नियमसम्मत चल्नुपर्छ । स् थानीय सरकारले फो हो र उठाएन । अन्य सुविधा दिएन भने र गाली गनेर् हो भने आफू नियम कानूनअनुसार चले को हुनुपर्छ । त्यो भने को दर्ता गरे र व्यवसाय गर्नु । नियमसम्मत तरीकाले नवीकरण गर्नु पनि हो  । हाम्रो करले बाच्ने हामीलाई सताउने भने र प्रश्न गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसै ले अनुगमन पर्खिने हो इन । सरकारलाई झक्झक्याउन तयार भएर बस्ने हो  ।
Previous: तुलसीपुर र घोराहीमा नेकपा जबसको ¥याली
Next: प्रशंसात्मक खोजसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय सम्मेलन